उज्ज्वल र आकर्षक VJ Vyacheslav Nikitin - हाम्रो लेखको नायक। धेरै प्रशंसक आफ्नो जीवनी र व्यक्तिगत जीवनमा चासो हो। तपाईं पनि आफ्नो नम्बर आफैलाई विचार गर्छन्? त्यसपछि लेख सामग्रीहरू जाँच गर्न निश्चित हुन।
Vyacheslav Nikitin जीवनी, बाल्यकाल
उहाँले 10 अप्रिल, 1987 नोवोसिबिर्स्क मा जन्म भएको थियो। Vyacheslav एक साधारण सोभियत परिवारमा हुर्केका थिए। आफ्नो आमा एक शिक्षक रूपमा नर्सरी, एक किंडरगार्टन मा काम गरे। बुबा प्राविधिक पेशों को सदस्य हुनुहुन्छ।
उहाँले5वर्षको हुँदा, आफ्नो आमाबाबु तिनलाई स्टूडियो पठाइएको रूसी लोक नृत्य को, उहाँले जवान टेक्नीसियन एउटा सर्कल मा जान चाहे हुनत। Vyacheslav शुरू नृत्य मा कक्षाहरू धाउन हिचकिचाए। तर महिना को एक जोडी पछि उहाँले गम्भीर यो द्वारा दूर गरियो। फलस्वरूप, उहाँले नृत्य आफ्नो जीवनको4वर्ष समर्पित।
10 वर्ष पुरानो केटा उहाँले Balalaika खेल्न सिकेका जहाँ एक सर्कल, मा भर्ना। केही महिना मा, त्यो पूर्ण यो लोक साधन महारत।
उच्च स्कूलमा, Vyacheslav Nikitin पौडी, जूडो, बास्केटबल र चेस एक खेल मा लगे। सामान्य मा, हाम्रो नायक सबै सर्वांगीण विकास गर्यो।
माध्यमिक विद्यालय पूरा गरेपछि Vyacheslav एक स्थानीय विश्वविद्यालय मा भर्ना। उहाँले लेखा अध्ययन। एक विद्यार्थी रूपमा, Nikitin मूल उच्च विद्यालय जीवनमा एउटा सक्रिय भाग लिए। उदाहरणका लागि, मान्छे स्थानीय KVN खेल थियो। दर्शक रम्न गर्न - पनि त्यसपछि एक राम्रो श्यामला आफ्नो मुख्य मिशन थाह थियो।
लगभग 2.5 वर्ष Vyacheslav को नोवोसिबिर्स्क टेलिभिजन मा काम गरे। एक संवाददाता र प्रस्तोता - उहाँले दुई स्थान संयुक्त। स्थानीय च्यानल पुस्तिका Nikitin संग सहयोग सन्तुष्ट थियो। तर जवान यो शहर बस अव्यावहारिक छ मा क्यारियर विकास हासिल गर्न भनेर बुझे।
जनवरी 2009 मा नोवोसिबिर्स्क देखि एक उज्ज्वल र समर्पित मान्छे मास्को आए। म त्यतिबेला राजधानी मा काम गर्ने आफ्नो पुरानो मित्र, मा उहाँलाई sheltered। एक महिना पछि हाम्रो नायक यहाँ मेरो प्रेमिका ल्याए र एक घर भाडामा लियो।
एक RU.TV Vyacheslav एक असल मित्र मदत प्राप्त गर्नुहोस्। तर, बाह्य डाटा मान्छे र नोवोसिबिर्स्क च्यानलमा अनुभव पनि भूमिका खेलेका।
धेरै वर्ष को लागि, Nikitin रूसी को तारा र शो व्यापार को संसारको जीवन, साथै चलचित्रहरू र संगीत को नयाँ उत्पादन देखि दर्शकहरूलाई समाचार बताउँछ। आफ्नो साक्षर बोली, शब्दावली र आपूर्ति धेरै अग्रणी सामाग्री ईर्ष्या सक्छ को तरिका।
Vyacheslav Nikitin एक महिलाहरु 'मानिस र एक womanizer कहिल्यै थियो। उच्च विद्यालय मा, त्यो एक केटी, भेट स्मृति बिना प्रेम गरे। आफ्नो भावना आपसी थिए। प्रेमीहरूको सँगै 2009 मा मास्को आए। तिनीहरूले एक घर भाडामा लियो। Vyacheslav एक प्रमुख आर्जन थियो। त्यो घर सफा र खाना पकाउन कायम। यो आफ्नो सम्बन्ध आदर्श ढाँचा मा निर्माण गरिएको छ कि जस्तो थियो। तर चाँडै सम्बन्ध मा एक दरार। को भ्कगडा प्रेम, त्यसपछि मिलाप। एक दिन तिनीहरूले अन्तमा छोड्न निर्णय गरे।
फेब्रुअरी 2011 मा, Vyacheslav Nikitin समूह नमस्ते-फाइ Tatyanoy Tereshinoy को पूर्व soloist भेटे। तिनीहरूले एक whirlwind रोमान्स गर्न थाले। सुन्दर र पातलो केटी हाम्रो नायक को हृदय जित्यो। मानिस पनि त्यो7वर्ष को लागि उहाँलाई भन्दा पुरानो भन्ने पाऱ्यो छैन।
डिसेम्बर 2013 मा जोडे छोरी जन्मिएका थिए। बेबी एक असामान्य र दुर्लभ नाम प्राप्त - Aris। साधारण एक बच्चा उपस्थिति भए तापनि जवान मानिसहरू सम्बन्ध formalize कुनै हतारमा छन्। तिनीहरूले पासपोर्ट मा टिकट मात्र औपचारिकता छ विश्वास गर्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो महसुस।
टिभी - गतिविधिको छैन मात्र क्षेत्र जसमा Vyacheslav Nikitin व्यस्त। हाम्रो नायक नै एक रचनात्मक र संसाधन पाहुना घटनाहरू रूपमा स्थापित भएको छ। यस क्षेत्रमा आफ्नो विशेषज्ञता 8 वर्ष छ। विवाह, जन्मदिन, प्रस्तुति, कर्पोरेट दल - यी र अन्य गतिविधिहरु उहाँले उच्चतम स्तर मा बाहिर वहन। आफ्नो काम बारे कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया रिपोर्ट गरिएको छ।
Vyacheslav Nikitin - अब तपाईं जीवनी र व्यक्तिगत जीवन VJ RU.TV विवरण थाह छ। हामी उहाँलाई हरेक सफलता र शान्त परिवारको आनन्द इच्छा!
जीवनी Elena Vaenga अरु मन
Daniyar Irmatov: जीवनी र काम
भिसेन्जा आकर्षण, आफ्नो विवरण र फोटो
शीर्ष 10 - उत्पादनहरु जो हेमोग्लोबिन वृद्धि
फ्राइड झिंगा र यसको विविधताका लागि नुस्खा
किन बम को सपना? सपना व्याख्याहरु को पुस्तक
थिम्ड शब्द समूह: उदाहरणहरू
काठ - शिल्प आफ्नै हातले बनाएको
औषधि "Omacor": विभिन्न देशका डाक्टर समीक्षा फरक
Lipoic एसिड: गाइड, विशेष गरी जब वजन दक्षता असर।